Raad Raac News Online – Qarax uu ku dhintay Askari Kenyan ah oo ka dhacay Degmada Wajeer
Qarax uu ku dhintay Askari Kenyan ah oo ka dhacay Degmada Wajeer
Faarax February 3, 2013 0
Goobjoogiyaal ayaa sheegay in Hal Askari oo Kenyan ah uu ku dhintay Qarax weyn oo xalay ka dhacay Degmada Wajeer Gobolka Waqooyo Bari ee Kenya.
Saraakiisha Booliska ayaa xaqjiiyay in mid Ciidamadooda uu ku geeriyooday qarax ay u maleeyeen inuu ahaa Ismiidaamin, kaasi oo lala eegtay Kolonyo Ciidamo ah oo kasoo laabtay Howlagalka Somalia eeka dhanka ah Al shabab.
Qarax oo si weyn looga maqlayay Magalaada Wajeer ayaa waxa uu dhacay Xalay 8.30pm. waqtiga dalka Kenya,iyadoo Goobta uu qaraxa ka dhacay ay gaareen Ciidamo badan oo Kenyan ah kuwaasi oo Howlgallo Baaritaano ah ka sameeyay halkaasi.
3 Qof oo Labo kamid ah ay yihiin Saraakiil Kenyana ah ayaa ku dhaawacmay Qaraxa sida ay dadka deeganka noo sheegeen,waxaana loola cararaya Isbitaalka magaalada Wajeer.
Wararka Qaar waxa ay sheegayaan in Qaraxa loo adeegsaday Bombka Gacanta laga tuuro.
Habeenkii Khamiista ee lasoo dhaafaya ayay ahayd markii Qaraxa lagu weeraray Gaari Booliks kenua ay la socdeen oo marayay Xerada Dhagaxleey ee ay ku noolyihiin Qaxootiga,waxaana Qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa 3 Askari oo kenyana ah.